किन गरे माओवादी केन्द्रका चर्चित नेता भण्डारीले पार्टी परित्याग ? यस्तो छ भित्री रहस्य
ARCHIVE, POLITICS » किन गरे माओवादी केन्द्रका चर्चित नेता भण्डारीले पार्टी परित्याग ? यस्तो छ भित्री रहस्य
काठमाडौं - माओवादी केन्द्रका नेता तथा चर्चित लेखक बिष्णु भण्डारीले पार्टी परित्याग गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै नेता भण्डारीले आफु माओवादी केन्द्रबाट अलग भएको घोषणा गरेका हुन् ।
उनले माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सदस्य, जनसांस्कृतिक महासङ्घको उपाध्यक्ष र अखिल नेपाल लेखक सङ्घको अध्यक्षको जिम्मेबारीबाट अलग भएको घोषणा गरेका छन् ।
पछिल्लोसमय माओवादी केन्द्रले एमालेसँग एकता गर्ने निर्णय गरेसँगै नेता कार्यकर्ताहरुले पार्टी परित्याग गर्न थालेका छन् । माओवादीले १० बर्षे जनयुद्धको मर्म र पार्टी सिद्धान्त विपरीत गएर एकताको नाममा एमालेसँग बिलय हुने निर्णय गरेको भन्दै कयौं कार्यकर्ता रुष्ट बनेका छन् ।
एमालेसँग एकता गर्ने निर्णयले माओवादी भित्र रहेका क्रान्तिकारी नेता कार्यकर्ताहरुमा तरङ्ग नै पैदा गरेको छ । लामोसमयसम्म पार्टीमा रहेर काम गरेका पुराना नेता कार्यकर्ता र लेखक बुद्दिजिबिहरु पार्टी परित्याग गर्दै अलग्गिन थालेका छन् ।